Mpanamboatra sy Orinasa Simenitra vy tsara indrindra |Gimarpol
Ny tontonana dia hanome sehatra marin-toerana mifanaraka amin'ny tontolo manodidina ny birao sy ny efitranon'ny fitaovana.Ny takelaka gorodona dia hamboarina amin'ny fampiasana vy tsara kalitao ho an'ny vilany ambany ary vy mafy feno ho an'ny takelaka ambony.Ny tontonana dia ho feno welded miaraka (farafahakeliny 64 welds isaky ny dome ary 20 welds eo amin'ny flange tsirairay).
Ny tontonana dia ho faty tapaka araka ny habeny, phosphate mifono (na mitovy) ary epoxy vovoka mifono mba hanome sahaza ny harafesiny fiarovana.
Ny tontonana dia hohidiana amin'ny toerany manome fatorana mitovy na azo atao amin'ny gravité miaraka na tsy misy kofehy.
Ny rafitra gorodona avoakan'ny gorodona dia hahazaka ny enta-mavesatra static/dynamika adidy amin'ny birao ankapobeny sy ny tontolo manodidina ny fitaovana.
- Haben'ny tontonana 600x600x35m na 610x610x35mm na 500x500x27mm
- Fivoriambe vy ara-drafitra welded
- Famenoana simenitra voaforona
- Vita vita amin'ny epoxy vita amin'ny vovoka
-Stability: mijanona ho marin-toerana ary tsy manova ny toetra amam-panao rehefa tratran'ny hafananaary fiovan'ny hamandoana.
- Ny singa rehetra dia tokony harovana amin'ny harafesina miaraka amin'ny fanamboaran'ny orinasa manara-penitra vita amin'ny fiarovana.
Sary SC35-FS800 3600N 19800N 10800N 3 10 heny 3000N
10000x 2200N 670N
Sary SC35-FS1000 4500N 23300N 13500N 3 10 heny 3600N
Sary SC35-FS1250 5600N 33100N 16800N 3 10 heny 4500N
Sary SC35-FS1500 6700N 42600N 20100N 3 10 heny 5600N
SC35-FS2000 8900N 49800N 26700N 3 10 heny 6700N
Ny gorodona avoakan'ny fidirana dia iharan'ny birao ankapobeny sy ny tontolo manodidina ny efitrano fitaovan'ny fitaovana.Toeram-piasana,fizarazarana, racking sy filing system
hiteraka entana static.Ny enta-mavesatry ny dinamika dia hifanaraka amin'ny tongotra matetikafifamoivoizana eny amin'ny lavarangana fisandratana, lalantsara, lalan-dàlana ary enta-mavesatra mihodinkodina matetika.
-Afo mahatohitra.Ny fepetra takiana dia hifanaraka amin'ny British Standard 476: Fizarana 7:1997 sy Fizarana 6:1989
teo aloha: Calcium Sulphate Panel
Manaraka: Glass Panel
Grommet borosy 105x280mm